पानीमाथि ओभानो हुने प्रधानमन्त्रीको चाल
सरकारको अन्तिम अन्तिम समयमा आइपुग्दा विगतका दिनको समीक्षा होला, गरिएका काम, निर्णय कति सफल, असफल भए भन्ने विषयमा केही मिठो कुरा सुनिएला भनेको त प्रधानमन्त्रीले सबैलाई छक्क पारेका छन् । आफु मातहतका कर्मचारीलाई उनले बडो क्रान्तिकारी कुरा गरेर सर्वसाधारणतर्फ बडो चोखिने उपायले निर्देशन दिएका छन् ।
उनले निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुलाई त्यति अस्वभाविक लिन नमिल्ला । प्रशासनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न र विलाशिता त्याग्न निर्देशन धमिलो पानीमा माछा मार्नु नै हो । भ्रष्ट्राचार भनेको के ? दुई पटक चुनाव हारेका मान्छे प्रधानमन्त्री भ्रष्ट्राचार होइन । आफु चुनाव लडेको क्षेत्रमा पुल बनाउन विशेष व्यवस्था गर्नु भ्रष्ट्राचार होइन ? व्यंग्य नै गरेछन् ।
उनले सचिव तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई ठूला गाडी नचढ्न, र अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्न पनि भनेका छन् । यो पनि उनको अचम्म लाग्दो निर्देशन नै भयो । किनभने सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गरेर पैसाको खोलो बगाउने उनै हुन्, बिचरा क्षमतावान कर्मचारीलाई अनेक कुरा सुनाउँछन् । के भन्लान् भन्नु पनि छैन ।
प्रधानमन्त्रीका भनाई रोचक तरिकाले आएकोले प्रस्तुत गरिएको हो । उनले विभिन्न राजदूतावासहरुमा हुने भोजमा नजान कडा निर्देशन दिंदै प्रधानमन्त्रीले पैसा पाइन्छ भन्दैमा विदेशीले जे भन्छन त्यही मानेर सम्झौता नगर्न पनि भने । अरे बाबा, दिनदिनै राजदुतहरुलाई बोलाएर आफ्नै कार्यकक्षमा कुरा गर्ने उनैले, अनि अरुलाई नजान भन्ने ।
सरकार परिवर्तनका बेला उनको पार्टी लगायत शीर्ष भनिने असक्षम वृद्ध नेताहरुले जति राजदुतावासहरुमा को धाउँछ र । बिचरा कर्मचारी किन धाउनु । एक दुई जना केही लोभले जानु छुट्टै कुरा हो । यो विषयमा पनि राजनीतिक नेताहरु नै बदनाम छन् । अरुलाई किन भन्ने । जहाँसम्म विदेशीले जे दिन्छन् त्यसमा हवस् नभन्नुस भन्ने कुरा छ, देशमा केही छैन त अरुले दिएकोलाई हुन्न कसरी भन्ने ।
भनिएको छ कि, भाडामा सरकारी कार्यालयहरु राख्न हुन्न भनेर । आफ्ना कार्यालय बनाउन पैसा पनि त हुनुपर्‍यो नि । भएको पैसा कताकता बाँड्दा बाँड्दै स्वाहा, कहिले के संस्थानको नाममा, कहिले के बोर्ड कहिले के समिति । अनि भाडामा नराख्न भन्ने । बिचरा प्रधानमन्त्री, कस्ले देओस् बुद्धि । -महेन्द्र ।
आत्मरतिमा रमाउँदा सास्ती हुने रहेछ
काँग्रेसका लागि सरकारको नेतृत्व आकाशको फल हो भनौं भने पनि उसले जति सरकारको नेतृत्व अरु कसैले पाएको छैन । अर्थात उसले जति सरकारको स्वाद कसैले चाखेको छैन । पछिल्लो समयमा भने त्यस्तै भएको छ । कामकुरो एकातिर छ, तर काँग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरु आफ्नै तालमा छन् । अर्थात सरकारको नेतृत्व गर्न दलका नेताहरुसँग परामर्श गर्दै हिंड्न थालेका छन् ।
यसै क्रममा काँग्रेस नेताहरुले एकीकृत माओवादीका नेताहरुसँग वार्ता गरी काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । बिचरा माओवादी पो धर्मसंकटमा, वर्षे लामो आन्दोलन, निर्णायक मानिएको तीन बुँदे सहमतिपछि त सरकारमा जान निकै सजिलो छ भन्ने ठानेर ढुक्कका साथ बसेको सो पार्टीले अब के उत्तर दिने भन्ने पो समस्या होला जस्तो छ ।
सबैले देख्दादेख्दै, सबैले महसुस गरिरहँदा संघर्षलाई काँग्रेसका नेताहरुले नेतृत्व माग्न थालेपछि बिचरा माओवादी नेताहरुको निद्रा हराम भएको पो छ कि । किनभने कुन मन्त्रालय, कुन विभाग आफ्नो जिम्मामा लिने भन्नेमा आन्तरिक तयारी पो भइसकेको थियो कि, प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजिनामा दिने भनेपछि ?
काँग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरुको यो चाला छ भने काँग्रेसमा पनि यसले भुइँचालो गएको छ । काँग्रेस केन्द्रीय समितिले अवसर पाए राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नका लागि नेताहरुमा दौडधुप समेत चलेको छ । कावा सभापति सुशील कोइरालाले रामचन्द्र नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएको संकेत के गरेका थिए, देउवाको सातो गएको छ । वरिष्ठ नेता हुँ भन्ने पनि होला नि ।
त्यही मुद्दालाई लिएर काठमाण्डौंका काँग्रेस नेता चक्रबहादुर ठकुरीको निवासमा शेरबहादुर देउवा पक्षधर सभासद्हरुले भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । देउवा पक्षका ठकुरीले भने बैठक अघि खाना खानका लागि सभासद्हरुलाई आमन्त्रण गरिएको दाबी गरे । बोलाएकै हो भने पनि त हुन्थ्यो नि । देउवाको चित्त बुझेको छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
त्यसो त देउवाले पार्टी एकीकरण भएको हो, आफु संस्थापनमा विलय भएको होइन भनेर आफ्नो स्ट्याण्ड देखाउन खोजेका छन् । तर जे भएपनि सरकारको नेतृत्वमा सधैं आफैं दाबेदार हुँ भन्ने माओवादी, त्यही पथमा लम्केको काँग्रेसको आत्मरतिले निचोडमा पुग्ने त कता हो कता झनै अन्योल पो बढाउला जस्तो छ । -महेन्द्र । तस्वीरमा, संस्थापन पक्षसँग आगो बनेका देउवा ।
प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आउँदै आएन
काठमाण्डौंमा विद्यार्थीले डेरा सरेजस्तै गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको आयुको भाका सारेको पनि उस्तैउस्तै छ । विद्यार्थीले मात्रै होइन घर नभएका सबैले डेरा सारेजस्तै प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, मन्त्रीहरुले पनि संकेत गर्ने गरेका छन्, पदीय दायित्व कहिलेसम्म हो भनेर । त्यसो त पदमा बसिरहनका लागि प्रधानमन्त्रीले भाका सारेका कहाँ हुन् र, पद छाड्नका लागि भाका सारेका अरे । कस्तो बाझिएको भनाई हो कुन्नि ।
जेठ चौध गते राति संविधानसभाको म्याद बढाउनका लागि भएपनि लाजकाजले दलहरुले तीन बुँदे सहमति गरे । तर त्यो सहमति पुर्वतयारी बिना गरिएकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि दाँतबाट पसिना आएका छन् । पुर्वतयारी भएको भए त राजिनामा र सरकार परिवर्तनका लागि यत्रो नाटक मञ्चन अहिलेसम्मै किन भइरहनुपथ्र्यो र ।
प्रधानमन्त्रीले जेठ २३, २६, असार ४, असार ४ को एक हप्ताभित्र, त्यो पनि नभए चाँडै नै भनेर यति धेरै भाका सारेका छन्, दलहरुले सहमति गर्नका लागि । समाचारमा प्रयोग हुने डेडलाइन जस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीको भाषामा सहमतिका लागि दलहरुलाई यो डेडलाइन नै हो अरे । तर दलहरुले डेडलाइन मिट नगरेर हो या प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएकै छैनन् ।
सरसर्ती हेर्दा त यो सबै असहमतिले जस्तो लाग्छ । किनभने एकीकृत माओवादी र काँग्रेसले कस्ले नेतृत्व गर्ने भनेर बताउनै सकेका छैनन् । आफुले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर चाहिं भनेकै छन् । त्यो त जस्ले पनि भन्छ नि । यो मात्रै दलहरुको समस्या । जुन पार्टीले नेतृत्व गरेपनि त्यो पार्टीभित्र पनि कुन नेताले गर्ने भन्नेमा के माओवादी के काँग्रेस दुवैमा मरिहत्ते गरेका छन् नेताहरुले ।
यसैबाट थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्रीका लागि कति महत्व दिइएको छ भनेर । पदको विवाद गर्ने समयमा संविधान निर्माणका लागि राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने, नयाँ कार्यतालिका बनाउन लागे त हुन्थ्यो नि । कस्ले बुझिदेओस् यो कुरा । उनीहरु भने बुझे पनि नबुझेजस्तो गर्छन् । साधारण जनतालाई त धेरै चिन्ता नहुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई लिएर, तर दलका प्रत्येक नेतालाई चिन्ता छ, राजिनामा दिए त......दुनो सोझाउने भनेर । वास्तवमा सबैले दिक्क मान्छन्, अधिकाशं राजनीतिक दलका नेताहरुको चाला देखेर । -महेन्द्र । तस्वीरमा, दलका नेताहरुले खोजेको कुर्ची ।
कहिल्यै निको नहुने रोग
June 17, 2010 6:52 am
सत्ता पाउने संकेत आउँदा भाइभाइमा विवाद
एकीकृत माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिने आशा अहिले आएर अकस्मात गरेको पनि होइन । उसले आफु नेतृत्वको सरकार ढलेपछि जब माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो, त्यसपछि नै सरकार आफुले पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका हुन् । सत्ताको नेतृत्व गर्ने आशा त्यतिबेला पनि पक्कै थियो होला । तर छिटै पाइने वा नपाइने भन्नेबारे अन्योल थियो कि ।
एक वर्षअघि आन्दोलन थाल्दा सरकारको नेतृत्वबारे विवाद थिएन भन्दा पनि फरक नपर्ला । त्यतिबेला प्रचण्डबाहेकको अरु विकल्पका बारेमा कमैले मात्र सोचेका थिए । जब बाबुराम भट्टराई भएपनि हुने भनेर सत्तारुढ दलले मुख खोल्न थाले माओवादमिा भुइँचालो जान थाल्यो । त्यसैको परिणामस्वरुप बाबुराम भट्टराईले भारतपरस्त बनेको भन्ने आशय आउने भनाई पनि खाए ।
आन्दोलन र सहमतिपश्चात जब अहिले नयाँ सरकार गठनको विषयले तातो पाउन थालेको छ, त्यसपछि भने सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा राम्रै बहस हुन थालेको छ सो पार्टीमा । पोलिटव्युरो बैठकमा सदस्यहरुबीच फरक मत आउने क्रम जारी नै छ । पोलिटब्युरो नेताहरुले आफ्ना आस्थाका नेताहरुका भनाईअनुसार हँ मा हँ मिलाएकै थिए, हाल आएर स्थायी समिति सदस्यहरुले नेतृत्वको विषयमा फरक-फरक मत राखेका छन् ।
सरकारका अघि घुँडा नटेक्न नेतृत्व सजग हुनुपर्ने केही नेताहरुको भनाई छ भने आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएकोमा जोड दिने गरेका छन् । जुन कुरा अघिललो दिन उपाध्यक्षद्धय बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यबीच विवाद भएजस्तै तरिकाले आएको छ । आन्दोलनमा जानु पर्ने कुरा वैद्यले गरेका थिए । केही सदस्यले भने संविधानसभको चुनावपछि पार्टीले पाएको ख्यातीलाई जोगाइराख्न सहमतिका साथ अघि बढनुपर्ने र यसो नगरिए सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट पार्टी पंक्ति बञ्चित हुनेमा सचेत गराएका छन्, जुन आशय भट्टराई पक्षधरको हो ।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालले पनि राजिनामा दिने तथा सरकारको अनुकुल वातावरण बन्दै जाँदा गठबन्धनमा विवाद त छँदै थियो, त्यतिले नपुगेर एउटै पार्टीभित्र पनि विवाद हुनु लज्जास्पद हो । नेतृत्वको विषयमा विवाद बढेका कारण शान्ति र संविधानको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको सेना समायोजनको विषयमा माओवादी बैठकमा विस्तृत छलफल हुन सकेको छैन । जुन अर्को यथार्थ हो, लाज मान्नुपर्ने । शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण ठानिने विषयमा छलफल नहुने तर सरकारकै विषयमा केन्द्रीत हुँदा माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने प्रचार गरिएअनुसार माओवादी पार्टीभित्र विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । गल्ती ढाक्न खोजेर के गर्ने । -महेन्द्र । तस्वीरमा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई ।
पैसाले बिगारेका मानिसहरुको जमघट
केके गरियो भनेको त केही न केही
धक्का, एक कदम अगाडि, एक कदम दायाँबायाँ, अलिकति पनि, केही पनि, यता, उता, भन्नेजस्ता शब्द राजनीतिका निकै चल्तीका भाषा । औंलामा गन्न सकिने केही नेताहरुको कुरा गर्ने हो भने त उनीहरुले उखान टुक्काको प्रयोगबाट भाषणलाई मसालादार बनाइदिन्छन् । त्यतिमात्र होइन, सत्तामा बसेका दलका प्रतिनिधिले नीतिगत निर्णय गर्दा कस्लाई कहाँबाट कहाँ पुर्‍याउँछन् पत्तै हुन्न ।
जनआन्दोलनमा आफ्नै टाउका फुटाउने मात्र होइन, आफ्नै बालबच्चाको ज्यानसम्म लिनेलाई त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी दलका नेताहरुले अहिले आएर पुरस्कृत गर्छन् । हो, उतिबेला उनीहरु राज्यका कुनै निकायमा रहेका हुनाले उनीहरुले त्यतिबेलाका शासकको आदेश मान्यौं भन्न कुनै लाज मान्नुपरेन । तर लाज मान्नुपर्ने त कम्तीमा हाल सत्तामा बसेका नेताजीहरुले पो हो ।
निर्णय गर्ने बेलामा लाज अर्थात ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेनन् मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरुले । बरु सचेत नागरिक तहबाट विरोध भएपछि पो थाहा पाए उनीहरुले, ध्यान दिनुपर्ने कुरा त त्यसो पो रहेछ । वास्तवमा सरकारको शीर्ष तहमा बसेकाहरुले आफु कुन पृष्ठभुमि, कुन तहबाट, कुन तरिकाबाट सत्तामा आएको भन्ने भुसुक्कै बिर्से, यसैको परिणाम बाहेक यो केही पनि होइन ।
त्यही थाहा पाएको परिणामस्वरुप जनआन्दोलनमा दमन र मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दिईएको पदक सरकारले फिर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले जनआन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागेका नेपाल प्रहरीका डिआईजीहरु दुर्जकुमार राई र कुबेरसिंह रानालाई दिएको पदक फिर्ता गरेको हो भने पदक वितरणप्रक्रिया नै धरापमा नपर्ला भन्न के बेर ।
यसअघि पदक वितरण प्रक्रिया गलत भएको भन्दै पुर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानासहित एक दर्जन भन्दा बढी ब्यक्तिले पदक नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले अब विभुषण दिंदा मापदण्ड बनाएर मात्र दिने र यस पटक देखिएको कमजोरी नदोहोर्‍याउने अठोट पनि ब्यक्त गरेको छ । तर अठोट र प्रतिबद्धताको त के विश्वास गर्नु । साँच्चै भन्ने हो भने यो पदक वितरणप्रक्रिया हुकुमी शैलीको छ । जो नजिक छ, उसले पायो, अरु भनेका त्यस्तै हुन् भनेजस्तो ।
हालसम्म राष्ट्रिय सम्मान पाएका सबै त्यस्तै भन्नु पनि मुर्खता हुन्छ । स्वभाविक रुपमा राम्रो काम गरेवापत इनाम पाएका व्यक्ति पनि होलान् । तर धेरै बदनाम मानिसलाई एकपटक यसरी पुरस्कृत गर्ने प्रयास भएपछि सबै प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ । -महेन्द्र । तस्वीरमा, शीर्ष नेताहरुको एक बैठक ।
May 30, 2010 7:58 am
कस्ले कस्लाई फसायो अनुमानै कठिन
वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा एकले अर्कोलाई फसाउने कामबाहेक अरु केही भएको पाइन्न । त्यसो त फसायो कस्ले, कस्लाई भन्ने थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । किनभने संविधानसभाको म्याद थपिएर चमत्कार भयो कसैले भन्ने, कसैले भन्ने संविधानसभाको म्याद थपेर प्रतिगामीहरुको षडयन्त्र असफल पारियो भनेर सबै पक्षले नाक ठुलो पारे ।
यो त केही समयको फुर्तीफार्ती थियो, पछिल्लो समयमा भने सहमतिका नाममा के भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन थालेको छ । सत्ता साझेदार १८ दलले संविधानसभाको म्याद थप्ने क्रममा तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन नभए सम्म राजीनामा नदिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । त्यही आडमा प्रधानमन्त्री नजिकका नेताहरुले पनि राजिनामा दिने सहमति भएको होइन कि झैं जस्तो गर्न थालेका छन् ।
त्यसो त बैठकमा मौखिक रुपमा कस्ले के भन्यो भनेर पत्याउन न त काँग्रेस एमालेका भनाई पत्याउन सकिन्छ, न त भनाई पत्याउन सकिन्छ माओवादी नेताहरुको । सरकारलाई समर्थन गर्ने नेताहरुले अबिलम्ब राजीनामा दिने भन्नुको अर्थ तत्काल राजीनामा दिने नभएको भन्दै सहमति नबने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताएका छन् । सहमतिका लागि पो राजिनामा दिने पो भनेको, त्यति पनि नबुझेजस्तो गरी कुर्सी छोड्ने आँट गर्दैनन् साना दलहरु पनि ।
तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुादामा शान्ति सम्झौतालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन बााकी रहेका कामहरु पूरा गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सहमतिको तेस्रो बुँदामा उपर्युक्त जिम्मेवारी पूरा गरी सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उल्लेख छ । वास्तवमा सत्ताधारी पक्षका धेरै नेताले यही कुरा गर्न थालेका छन् कि, राजिनामा भन्ने चरी धेरै पर छिन् ।
त्यसो त सत्ताको स्वाद चाख्न माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले चेकमात्र पाएको तर बैंकमा गएर पैसा अर्थात सत्ता पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । त्यसो त प्रमुख तीन दलका नेताहरुबीच भएको बैठकमा सहमतिको ब्याख्याबारे विवाद उत्पन्न छ । एकीकृत माओवादीका नेताहरुले तीन बाुदे सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा पहिले आउनुपर्ने बताएका थिए भने कांग्रेस-एमाले नेताहरुले पूर्व सहमतिहरुको कार्यान्वयनपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने ब्याख्या गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । यहींबाट थाहा हुन्छ, दुवै पक्षमा कुनै न कुनै खोंट अर्थात, सत्ताको मोह छ । यही मोहले त बिगारेको छ, देशलाई । - महेन्द्र । तस्वीरमा, बाइस दलको बैठक ।
राजनीतिको कुरा नगर्ने किः पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह
बिस्तारै भएपनि घैंटोमा घाम लाग्ने संकेत
जानकारीहरुअनुसार सत्ताधारी दल एमालेले समायोजन गरिने माओवादी लडाकुको संख्या तत्काल नतोकेरै पनि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने माओवादी प्रस्तावप्रति लचिलो बन्ने संकेत गरेको छ । लडाकुलाई सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा ल्याई उनीहरुलाई तीन समूहमा विभाजन गरेर अगाडि बढन सकिने निष्कर्षमा एमाले पुगेको हो ।
कुरा यतिमात्र होइन, माओवादी नेतृत्वमा नयाँ संयुक्त सरकार बनाउने विषयमा माओवादी लचिलो बनेपछि मात्रै एमालेको यो निष्कर्ष आएको छ । आखिर सत्ताका लागि नै दलहरुको ध्यान तानिएकै हो भन्नु कुरा यहींबाट खुल्न आउँछ । सरकारको नाममा सेना समायोजनजस्तो विषयमा पनि सहमति हुन्छ भने त्यो निकै राम्रो कुरा हो । तर सत्तामा जानका लागि वा सत्तामा बसिरहनका लागि सेना समायोजनको हतियार प्रयोग गरियो भने त्यसको प्रभाव भने सकारात्मक पर्ने देखिन्न ।
माओवादी पनि सत्तामा जानका लागि जनयुद्धमा जानुपर्ने भन्नेतर्फ पनि नेतृत्वले विकल्प सोच्न थालेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभाको म्याद थपेर अझै एकपटक अन्तिम प्रयास गर्नुपर्ने र त्यसबाट पनि पार नलागे जनयुद्धमा र्फकनुपर्नेमा जोड दिईएको ६ पेज लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।
खासगरी अन्य दलका कार्यकर्ता तथा कुनै आन्दोलनका लागि प्रदर्शन गरिंदा निकै आक्रामक हुने माओवादी कार्यकर्तालाई यो प्रतिवेदनको कस्तो मनोवैज्ञानिक असर हुने हो, हेर्न बाँकी छ, यसको असर सकारात्मक होला भन्न भने कमै सकिन्छ । त्यसो त दलहरु निकै निराशावादी तथा सहमतिमा पुग्न नसकिएला भन्ने डर मानेका पनि देखिन्नन् । यही क्रममा काँग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच भएको पछिल्लो छलफल सकारात्मक र सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरेका छन् ।
तर गज्जबको विषय त के छ भने बिहान एउटा निर्णय गर्ने अथवा सहमति भएका जस्ता हल्ला गर्ने तर साँझपख घुर्की र धम्कीका कुरा गर्ने गर्छन् । वास्तवमा यसरी हेर्दा दलका नेताहरु त सिंह र बाघजस्ता भएका छन्, मांसाहारी शिकारी जनावरले रात परेपछि शिकार गरेजस्तै । साँझ परेपछि सहमति जति स्वाहा भनेर कसैले आरोप लगाएजस्तै भैगयो नि, यसरी त । किनभने यो सहमतिको कुरा आएलगत्तै दुइ ठूला सत्ता साझेदार दल एमाले र काँग्रेसले शान्ति प्रकृया र संविधान लेखनको कार्यतालिकाबारे माओवादीबाट स्पष्ट प्रतिवद्धता आए सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । सबै दल सहमति भन्दा पनि आफ्नै स्ट्यान्डमा अडिरहन चाहन्छन्, मात्रै । -महेन्द्र । तस्वीरमा, एक राजनीतिक बहसमा सहभागी हुँदै राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका राप्रपा नेपालका नेता कमल थापा ।
मानव जीवनमा पद पनि निकै प्यारो हुँदो रहेछ
मदनकृष्णलाई बोल्न अवरोध गर्दाको क्षण
May 09, 2010 5:29 am
नेताहरुको निर्देशनमा पत्रकार कुटिन थाले
'एन्टि माओइष्ट होइन, पिस सपोर्टर हो भन्दा पनि कुटे'
केके भयो आमहडतालको चौथो दिन
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामा माग्दै आमहडतालमा उत्रिएको एकीकृत माओवादीले आन्दोलनको चौथो दिन पनि देश ठप्प पार्‍यो । काठमाडौंमा माओवादीले सो दिन आफ्नो शक्ति सिंह दरबार वरपर केन्द्रीत गर्‍यो । मन्त्रीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न नदिने माओवादी योजना भने फेल खाएको छ । मन्त्रीहरु एकाविहानै सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए । बिहान ३ बजे सिंहदरबार छिरेपछि किन फेल नखाओस् र माओवादी योजनाले ।
एकीकृत माओवादीले गरको अनिश्चितकालीन आमहडतालका कारण राजधानीको जनजीवन क्रमशः अस्तव्यस्त बन्दै गएको अवस्थामा बजार, उद्योगधन्दा, कलकारखना बन्द नै रहेका छन भने आमनागरिक हिँडेरै गन्तव्यतर्फ अघि बढिरहेका देखिन्थे । राजधानीको सडकमा पैदल यात्रुको संख्या बढी नै देखिन थालेको छ । यसले के देखाएको छ भने, अब यातायातका साधन होइन कि, रिक्सा जस्ता पुराना साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आउनुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।
प्रदर्शनकारीले शुरुका दिनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेपनि पछिल्ला दिनमा राजधानीका सडकमा रहेका ट्राफिक डिभाइडर लडाएका छन । त्यतिमात्र कहाँ हो र, भक्तपुरको त्रिपुरासुन्दरीमा एमाले निकट युथफोर्स र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । उपत्यकाबाहेकका हुम्ला, चितवन लगायतका जिल्लामा माओवादी कार्यकर्ताको काँग्रेस एमालेका कार्यकर्तासँग झडप भएको छ ।
किसान पनि चुप लाग्न छाडेका छन् अहिले, काभ्रेको धुम्खर्कमा दुध विक्रि वितरणमा माओवादीले रोक लगाएपछि स्थानियवासीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन । धादिङको बैरेनी बजारमा किसानले दुध पोखेर आमहडतालको विरोध गरेका छन् । आन्दोलन फिर्ता लिने बेला भएर पो हो कि, यस्तो प्रतिक्रिया आउन थालेपछि त । सत्ता नपाए मरिगए फिर्ता नहुने पो हो कि भन्ने आशंका भने छाएको छ ।
देशको ठुलो शहर महेन्द्रनगरको भानुचोकमा बन्दको अवज्ञा गर्दै मोटरसाइकल चलाएको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले मोटरसाइकल तोडफोड गरेका छन । महेन्द्रनगरकै शिवानी मिठाई पसल माओवादी कार्यकर्ताले तोडफोड गर्नुका साथै सञ्चालक जयप्रकास गुप्तालाई कुटपिट गरेका छन् । जसले जति जे भनेपनि आन्दोलन क्षति बनाउने तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ ।
आन्दोलन गर्न दलहरुलाई पनि फकाउन सकेन माओवादी नेतृत्वले, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक कार्यकर्ताले जनकपुरमा माओवादी आमहडताल विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन । लाठीसहित सडकमा ओर्लिएका फोरम कार्यकर्ताले माओवादी विरुद्ध चर्को नारावाजी गर्नुका साथै व्यापारीहरुलाई पसल खोल्न आग्रह गरेका थिए । - महेन्द्र ।
What was reported versus what transpired... tid bits from the homeland
Please take note of my afternoon reconnaissance from 1530 hrs to 1830 hrs. Location - Along the ring road from Samakhusi junction, Gagabu junction, Dhapsi junction, Chakra path junction, Tusal junction, and Dhubarahi junction. All waiting for Prachanda and his cohorts to come driving inamini-Tata truck at 1730 hours. The junctions were lined up with the Maoists in two parallel lines for the truck to pass in between. About 100 Maoists lined up holding hands in Chakra path junction and about 30 Maoists on all other junctions. The male / female ratioo was about 15 : 1. The most horrible women you could ever imagine were with the Maoists.They cheered and clapped as Prachanda drove by. The timing was well planned - the right time for the bored people to come out for an evening stroll. So junctions had about two hundred spectators or less in total and the road stretch between junctions hadafew as audience. Chakra path had about 500 due to the vegetable market. My total estimate of the people (in the six junctions)was about 2000 maximum with the Maoists and the audience together. The minute their leader passed, the Maoists hurried to their dinner destinations inaflash. They all looked tired and beleaugered. So please forget this encirclement of the Kathmandu and Patan municipalities withahuman chain consisting of "over 3,00,000 hard core dedicated and indoctrinated Maoists". The human chain had long gaps. Even with the evening strollers it would be less than 30,000. However, the TV news were stating as if the ring road hadacontinuous human chain.
May 01, 2010 6:29 am
मे दिवसमा केके भयो नेपालमा
'कति हजार लेखौं'
राजधानीको अनुहार फेरिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । फेरिनु स्वभाविकै पनि हो । परिवर्तनशील संसारमा फेरिएन भने पनि त त्यसको अर्थ नरहला । तर फेरिने तरिका पो भाँती भाँतीका हुन्छन् र पो । देशमा द्धन्द्धकालको अवस्था रहँदा राजधानी सुरक्षित छ भनेर ढुक्क हुने दिन गएका पो हुन् कि । त्यसो त राजधानीमै व्यावसायीको हत्या हुँदा सबै ठुला दलका नेताले पनि पछिल्लोपटक राजधानीलाई निकै सुरक्षित भनेर पगरी गुथाइदिएकै हुन् ।
राजधानीमा थाहै नदिइकन आपराधिक घटना भएकै थिए । तर आपराधिक मात्रै होइन राजनीतिक कारणले पनि राजधानी असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ । मई एकको प्रदर्शनको लागि भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले चन्दा माग्न थालेपछि । राजधानीका बजार बन्द नभएका ठाउँ कमै होलान् । त्यो पनि दुईदिन अघिदेखि तीव्र पारिएको चन्दा उठाउने अभियानले सो कार्यको दोस्रो दिनमा व्यावसायीहरुको होसै काढेछ ।
यही बाध्यताले होला, उपत्यकाको पश्चिम कलंकीदेखि पुर्व कोटेश्वर अनि अरु दिशा का साथै बीचका अधिकांश चिनिएका व्यापारिक केन्द्र मात्रै होइनन्, सामान्य पसल पनि बन्द भए । हुन् पनि केहीको समुहमा आउने, रातो रसिद निकाल्ने, अनि भनिहाल्ने, कति हजार लेखौं भनेर । व्यावसायीको अवस्था के हो, कति आम्दानी छ, घाटामा छ वा व्यापार घटेको बेलामा के गर्छ भन्ने अनुमान नै नगरिकन बाजेलाई घर किनिदिने जस्तै गरी हजारौं चन्दाका कुरा गर्दा सानातिना व्यापारी त जिब्रै टोक्दारहेछन् ।
माओवादी नेताहरुले भने चन्दा स्वेच्छाले दिने भएको भन्ने गरेका छन् । जबकि व्यापारीहरुले पचास हजारदेखि एक लाखसम्म पैसा मागेपछि बन्दै गर्नुपरेको दुखेसो पोख्ने गरेका छन् । नेताहरु भन्छन्, चन्दाबाटै आन्दोलन गरिएकै हो, चन्दाका लागि स्वतः सहयोग आएकोले सहयोग पुगेको थियो भने अब पनि त्यही सहयोग हुन्छ । तर गुनासो भने आएको छ कि चन्दा दिनु रहरले होइन ।
हतियारको लडाइँबाट लाठी र खुकुरीमा आएर हो कि, हाल भने पहिलेजस्तो धम्की दिन सजिलो रहेनछ । माओवादी कार्यकर्ताले भनेअनुसार नदिने अडान राख्न केही व्यापारी नडराउने रहेछन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी आएपछि पलाएको भरोसा पो रहेछ कि । खुकुरी र लाठीको तालिम लिएर आउनेले नहान्लान् भनेर कसरी भन्ने, सोचेर केहीले भने मागेजति नै चन्दा दिएको पनि सुनिन्छ । -महेन्द्र । तस्वीरमा बन्द बजार ।
मार्चपास मय बनेको काठमाण्डौं
सातबजे अघि उठ्ने राजधानीबासी कमै छन् होला । तैपनि पछिल्लो समय रामदेवमय तथा आधुनिक जीवनशैलीका कारण भन्ने कि, स्वस्थ हुनलाई चिकित्सकले दिएको सल्लाह, जे भएपनि तुलनात्मक रुपमा बिहानै स्वाँ र फ्वाँ गर्दै दौड्ने मानिस धेरै भेटिन्छन् । यो बाहेक बिहानै पत्रपत्रिका वितरण गर्ने, कलेज जाने, अनि अन्य नियमित काम गर्ने पनि भइहाल्ने नै भए ।
दिउँसो एकजना पत्रपत्रिका वितरकसँग भेट भयो । उनको कुरा सुन्दा राजधानी माओवादीको मई एकको तयारीले झकिझकाउ भइसकेको आभास भइरहेको छ । मई एक आउन केही दिन बाँकी छँदा नै त्यसको झल्को आएको उनको भनाई छ । आँखा मिच्दै चिया पनि नखाइकन पत्रिका वितरण गर्न गएका ती व्यावसायीले राजधानीको एक निजी कलेजमा पत्रिका पर्खिएर बसेका मान्छे देख्ने अपेक्षा राखेका थिए । तर भइदियो अर्कै ।
जब उनी पत्रिका दिन गए, त्यहाँ त खाना पकाउने मेसो चलेको थियो, बिहानै साढे पाँच बजे । पत्रिका व्यावसायी मात्रै होइन छक्क पर्ने अरु पनि छन् । छक्क पर्नेमा विद्यार्थी पनि छन् । बिहानै बिहानै कति पढौंला भनेर कलेज र स्कुल गएका विद्यार्थीले कक्षा कोठामा बेन्च र टेबुल देख्नुपर्नेमा कोठाभरि ओछ्यान देखेपछि अचम्भित भए ।
छक्क पर्नेमा केवल माओवादी इतरका मानिस मात्र होइनन् । जिल्ल पर्ने त तालिम दिने माओवादी कार्यकर्ता पनि छन् । गुल्मीको वस्तु गाविस घर बताउने एक कार्यकर्ता, खुकुरी तालिमा दिंदा दिंदा थाकिसकेको गुनासो गर्दैथिए । बृद्ध व्यक्ति पनि मार्चपासमा आएको देखेर उनी आफ्ै छक्क पर्नुपरेको बताए । तालिम दिने माओवादी कार्यकर्ता छक्क परे भने अरु त झन् किन नपरुन् ।
आफ्नो नाम बताउन नचाहने वा नजान्ने व्यक्तिहरु पनि सडकमा लाइन लागेर मार्चपास गरेको देखिन्थ्यो । त्यसो त एकै खाले पोशाकमा रहेका माओवादी कार्यकर्तालेसडकमा निस्किएर मार्चपास गर्नुका साथै परेड समेत खेलेका थिए । विद्यालय कलेज मात्र बास बस्ने ठाउँ होइनन, गेष्टहाउस, पार्टी प्यालेस, सभाहल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, बास बसेका माओवादी कार्यकर्ताहरु सरकार विरुद्ध नारा लगाउादै सडकमा निस्किएपछि राजधानीको यातायात ब्यवस्था प्रभावित बनेको थियो ।
फोहोरमा बसिरहने बानी परेको उपत्यकामा केही काम पनि गरेका छन् है, माओवादी आन्दोलनमा सहभागी हुन आएकाहरुले । उनीहरुले काठमाडौंको पद्मोदय मोड, सुन्धारा, केशरमहल, त्रिपुरेश्वर, ठमेल लगायतका ठाउँमा सरसफाई अभियान चलाए । -महेन्द्र ।
के के भने निर्णायक बहसमा नेताहरुले ?